St Martin Sheet muusiga iyo qoraalka laga bilaabo xannaanada carruurta ee daabacaadda
Saint Martin song - qoraalka
Farshaxanka qoraalka iyo qoraalka St Martin Lied
Xilligan, waxay dadku la socdaan St. Martin. Ka qaybgalayaashu waxay heesi doonaan Martinslieder oo ay wehlinayaan kooxo.
Riixitaanka sawirka wuxuu furayaa bogga midabaynta qoraalada iyo qoraalka qaabka pdf
Farshaxanka iyo qoraalka St Martin
waxay fuulaan barafka iyo dabaysha,
faraskiisuna aad buu u fogaaday.
Saint Martin wuxuu ku fuulay geesinimo leh
jaakadiisu waxay ku dabooltaa si diiran oo wanaagsan.
waxaa jiray nin sabool ah barafka,
ma aysan dhar lahayn, dharbaaxay.
Bal muu iga caawiya cadaawayaashayda,
haddii kale dhaxan qadhaadh waa dhimashadayda.
Saint Martin ayaa soo jiidatay qalabkii,
oo fardihiisiina way la socdaan kii miskiin ah,
Saint Martin oo leh saamiyo dagaal
jaakad kuleylka ah oo aan diyaarsaneyn.
Saint Martin ayaa qeybtii hore,
qosolku wuxuu doonayaa inuu si dhakhso ah uga mahad celiyo.
Laakiin Saint Martin ayaa fuushay
isaga oo raacaya qaybtiisa jarka.
Saint Martin wuxuu isku dayaa inuu nasto
Rabbiguna wuxuu galayaa riyadan.
Wuxuu xidhan yahay jaakad sida dharka
wejigiisa ayaa iftiiminaya loveliness.Sankt Martin, Saint Martin,
Saint Martin wuxuu u muuqdaa mid la yaab leh
Rabbigu wuxuu isaga tusaa jidadka.
Wuxuu soo bandhigay kaniisad,
Martin ayaana doonaya inuu noqdo xertiisa.
Saint Martin wuxuu noqday wadaad
oo wuxuu u adeegay meeshii allabariga,
taasi waxay u egtahay inuu ku qurxiyo qabriga,
Ugu dambeyntii wuxuu qaaday xabad.
Saint Martin, oh nin ka mid ah Ilaah,
haddaba maqal dalbadayada
Tukasho nagu filan hadda
oo nagu barwaaqooba.
Muusikada furan ee heesaha St. Martin sida faylasha sawirada
St Martin Fest - Dhaqanka laakiin weli casri ah
Fadlan waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirtohaddii aad raadinayso qoraallo dheeraad ah iyo sheekooyin ku saabsan heesaha xanaanada. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku soo darno faahfaahin dheeraad ah oo qoraal ah oo ku qoran qoraalladayada loogu talagalay heesaha carruurta. Naqshadeynta qoraallada leh bogagga midabaynta ilmaha ku habboon waa mid adag, laakiin haddii ay lagama maarmaan tahay waxaan jecelahay inaan isku dayno.
Sannad kasta - qoraalada iyo qoraalka
Dhamaan feeradayda - qoraallada iyo qoraalka
Geedka kirismaska ​​nalalka ayaa gubanaya - qoraalo ...
On geedka a cuckoo fadhiistay - notes iyo text
Walaaley baa iiga qoob-ka-cayaaraan - qoraal iyo qoraal
Cuckoo iyo dameerka - qoraalada iyo qoraalka
Dayaxa ayaa kor u kacay - qoraal iyo qoraal